उम्मेद्वार मनोनयपछि महानगरका मेयर उम्मेद्वार के भन्छन्? (भिडियो)
अनिल तिवारी वीरगन्ज, भदौ २१
वीरगन्ज महानगरपालिकाका लागि आगामी असोज २ गते हुने निर्वाचनमा १८ जना मेयरले आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्।
प्रमुख पार्टीका मेयर उम्मेद्वार उम्मेद्वारी दर्ता पछि के भन्छन्-
विजय कुमार सरावगी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
वीरगन्जलाई हराभरा शहरसहित भ्रष्टाचार मुक्त महानगर बनाउँछु। वीरगन्जबासीको सेवा र विकास निर्माण मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै चुस्त–दुरुस्त, पारदर्शी, प्रविधियुक्त वीरगन्ज बनाउ लागिपर्छु।
नगरवासीको आय आर्जनलाई फराकिलो बनाउन रोजगारमुलक शिक्षा तथा स्थास्थ्य, किनमेल आदिको हब बनाउँदै मुलुककै प्रमुख आर्थिक नगरीको रुपमा अगाडि बनाउने प्रण गर्छु।
सडक, ढल, सरसफाई, विद्युत, शैक्षिक क्षेत्र, खेलकुद र सुसाशनका सवालमा बिगत पूर्वमेयरभन्दा बढी प्रगति र सुधार गरेर देखाउँछु।
ब्यवस्थित सहरीकरण, प्रदुषण नियन्त्रण र सरसफाई जस्ता विषय मेरो प्राथमिकतामा छ। वीरगन्जमा जोडिन आएको नयाँ क्षेत्रमा विकासको विषेश प्याकेज हामीले लैजाने छौं। यीनै कुरालाई हामीले आफ्नो चुनावी एजेण्डा र भविश्यको कार्यसूची बनाएका छँ।
यस्ता नारा लिएर हामी अघि बढेका छौं। वीरगन्ज आन्दोलनको केन्द्र बनेर मारमा पर्ने र पछि आन्दोलन यहाँ भयो भनेर राज्यको कुदृष्टीको शिकार बन्ने कहिलेसम्म चल्छ? यो अवस्थाबाट मुक्तिको लागि मैले यहाँ नगरको नेतृत्व लिन खोजेको हुँ।
अजय कुमार द्विवेदी, नेपाली काँग्रेस
काँग्रेससँग दृष्टीकोण छ, योजना छ र सामर्थ छ। इतिहास पनि हाम्रो विश्वासिलो छ, भविश्य पनि हाम्रो आशा गर्ने लायक छ। तर हाम्रो मुख्य नारा भनेको समग्र वीरगन्जको विकास नै हो। वीरगन्जलाई ब्यवस्थित सहर, समृद्ध सहर, स्वस्थ्य सहर, सफा सहर हाम्रो मुख्य नारा हो।
यसको साथसाथै अहिले वीरगन्जमा तीन गुणा ठूलो ग्रामिण क्षेत्रहरु जोडिएर आएको छ, पुरानो सहरको मात्र कुरा हामीले गर्न खोजेको होइन्। वीरगन्ज महानगपालिकामा पछाडि जोडिएका गाउँ तथा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने, पुरानो सहरलाई पनि सुबिधा बढाएर लैजाने नयाँलाई आधुनिक बनाउने भनेरनै हामी चुनावमा होमिएका हौ।
रहबर अन्सारी, माओवादी केन्द्र
वीरगन्ज महानगरलाई अब आफ्नो बेग्लै पहिचान चाहिएको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाको भौतिक पुर्वाधारको विकास जरूरी छ।
वीरगन्जवासीको सुख सुविधा र सहरको प्रगति कसरी हुने भन्ने योजनासाथ अघि बढेको छु। वीरगन्जलाई समृद्धी, विकास र सुशासान चाहिएको छ, युवा अग्रसरता चाहिएको छ। अब पुरानो र बुढो हातले होइन संसार देख्ने भिजन चाहिएको छ। यसैकारण आफूले उम्मेदवारी दिएको हुँ।
वीरगन्जलाई नेपालकै सबभन्दा आकर्षक महानगर र सुन्दर सहरको रूपमा विकसित गर्ने मेरो लक्ष्य हो। पहिलेका राजनीतिक खेलाडी र अहिलेको खेलाडीको परिभाषा बद्लिसकेको छ, पहिले विकासमा अवरोध गरेर राजनीति गर्ने परिपाटी थियो, अहिलेका खेलाडी विचारका खेलाडी हुन्। मतदाताले मलाई साँथ दिनेछन् भन्ने विश्वास लिएको छुँ।
बसरूदीन अन्सारी, नेकपा एमाले
जनताको माग र चाहना अनुसार मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ। जनतामा मेरो प्रति ठूलो आकर्षण भएकोले चुनाव लडेको छु। मेरो चुनावी मुद्दा विकास, विकास, विकास हो।
वीरगन्जको विकासको लागि मसँग ठूलो डिपिआर छ। फुर्सदमा आउनुस् मसँग बसेर कुरा गर्नुस् म देखाउने छु हामीले जितेपछि कसरी विरगन्जको विकास हुन्छ भनेर।
अहिले ९ करोड रूपैया कर बक्यौताको कुरा आएको छ, एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नेशनल मेडिकल कलेजले उम्मेदवारी दिएको होइन्, बसरूदीन अन्सारीले उम्मेदवारी दिएको हो। म त्यसको सञ्चालक हो। पहिला किन खोजिएन, यो सब हार्ने बिरोधीहरुको षडयन्त्र हो। अहिले मेरो लोकप्रियता देखेर हारको मानसिकतामा पुगेकाहरुले यस्तो गलत प्रचार गरिरहेका छन्।
राजेशमान सिंह, राष्ट्रिय जनता पार्टी
जबसम्म वीरगन्जका युवाहरुको बेरोजगारी अन्त्य गरी उनीहरूको रोजगारीको ब्यवस्था हुँदैन तबसम्म वीरगन्जको विकास हुँदैन। युवा जो रोजगारका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन्, उनीहरलाई देशमै रोजगारीको वातावरण बन्नुपर्छ र वीरगन्जका युवाहरूलाई त्यस्तो पलायनको अवस्थाबाट रोक्न यहाँ अवसरहरुको सृजना मेरो प्राथमिकतामा छ।
ग्रेटर वीरगन्जको अवधारणा अन्तर्गत समग्र वीरगन्जको विकासको योजना हामीले लिएका छौं, यही नै हाम्रो चुनावी एजेण्डा पनि हो।
बिमल प्रसाद श्रीवास्तव, नेपाल जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक
पहिले मैले गरेको विकास सबैले देखेका छन्। यो स्थानीय चुनावमा के हन्छ? स्थानीय एजेण्डा नै हुन्छ नि । त्यही नै हो। विकासको कुरा प्राथमिकता हो, त्यही नै हाम्रो मुल नारा हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भदौ २२, २०७४, ०१:०७:०७